छोरालाई हिरासतमा भेट्न किन गएनन् शाहरुख खान? – List Khabar
Home / समाचार / छोरालाई हिरासतमा भेट्न किन गएनन् शाहरुख खान?
admin October 10, 2021 समाचार Leaveacomment 83 Views
शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई अदालतले हिरासतमा पठाउन प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ । तर शाहरुख खान भने छोरालाई भेट्न गएका छैनन् । उनले आफ्नी म्यानेजर पूजालाई भेट्न पठाएका थिए । तर उनी आफू भने गएका छैनन् । उनले छोरासँग फोनमा कुरा भने गरेको बुझिएको छ ।
छोरा हिरासतमा रहेपनि कामको ब्यस्तताले शाहरुख त्यहाँ भेट्न नगएको बताइएको छ । तर उनले यससम्बन्धि कुनै प्रतिक्रिया समेत दिएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनका फ्यानहरु शाहरुखबाट आफ्नो छोराको अवस्थाबारे केही प्रतिक्रिया आओस् भन्ने चाहन्छन् ।
आर्यनका तर्फवाट गरिएको जमानत अपिल अदालतले इन्कार गरिदिएको छ । अक्टाबर ८ तारिखमा आर्यनलाई अदालत पेश गरिएको थियो । तर अदालतले उनको जमानत अपिल स्वीकार नगर्दै थप १४ दिनका लागि हिरासत पठाएको छ ।
आर्यनको जमानत निवेदन अदालतले शुक्रबार भएको सुनुवाईमा अस्वीकार गरेको छ। यसको मतलब यो छ कि आर्यन खान सहित सबै ८ जनाको अपिल अस्वीकार गरीएको हो । सबैलाई जे ल पठाइएको छ । शुक्रवार शाहरुखकी पत्नी गौरी खानको जन्मदिन थियो । उनलाई आफ्नो जन्मदिनमा छोरा घर आउने आश थियो । तर अदालतले त्यो आश पनि निरास बनाइदिएको छ ।
गौरी खान आफ्नो छोरा को यो हालत मा देखेर धेरै दुखी छन् । दुबै जना आफ्नो छोराको लागी जमानत पाउन सम्भव सबै प्रयास गरिरहेका छन्। तर, लाख प्रयास पछि पनि आर्यन जमानत पाउन सकेनन् । यसैबीच, अब गौरीको एउटा भिडियो इन्टरनेटमा देखिएको छ, जसमा उनी रोइरहेकी छिन् ।शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई अदालतले हिरासतमा पठाउन प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ । तर शाहरुख खान भने छोरालाई भेट्न गएका छैनन् । उनले आफ्नी म्यानेजर पूजालाई भेट्न पठाएका थिए । तर उनी आफू भने गएका छैनन् । उनले छोरासँग फोनमा कुरा भने गरेको बुझिएको छ ।
गौरी खान आफ्नो छोरा को यो हालत मा देखेर धेरै दुखी छन् । दुबै जना आफ्नो छोराको लागी जमानत पाउन सम्भव सबै प्रयास गरिरहेका छन्। तर, लाख प्रयास पछि पनि आर्यन जमानत पाउन सकेनन् । यसैबीच, अब गौरीको एउटा भिडियो इन्टरनेटमा देखिएको छ, जसमा उनी रोइरहेकी छिन् ।
Previous जय किशन बस्नेत तना,वमा, उनको छोरीलाई यस्तो सम्म गरेछन,जयले छोरिलाई यसरि ब,चाए,जाहन्वी अझ बे,होस (भिडियो सहित)
Next बिहे गरेको तीन महिनापछि श्रीमान आफ्नै हजुरबुबा भएको थाहा पाएपछि…